Global Voices teny Malagasy » “Amin’ny maha-vehivavy tompotany ahy, tiako ny isongadinan’ny vehivavy mpitarika” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Jona 2018 4:56 GMT 1	 · Mpanoratra Elena Gualapuro Nandika Andriamifidisoa Zo
Elena Gualapuro dia mpikambana ao amin'ny Association of Audiovisual Producers – Kichwa Otavalo (APAK na Fikambanan'ny Mpanatontosa Haino Aman-Jery) . Ny lahatsoratra manaraka etoana dia dika an-tsoratra amin'ny lahatsary fanadihadian'i Elena amin'ny zavon-tenin'ny “indígena” (tompotany) sy “mujer” (vehivavy) ao amin'ny tokotanin-tsehatra ekoadaoreana.
Voambolana mibahan-toerana nivoaka tao amin'ny lahatsoratra miisa 1599 tanelanelan'ny janoary 2017 sy avrily 2018 ka nanonona ny “indígena” (tompotany) sy tamin'ny lahatsoratra miisa 17.868 nanonona ny “mujer” (vehivavy) ao amin'ny angona Media Cloud roa avy amin'ny sehatra famoaham-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (jereo sary lehibe kokoa )
Ity dia ao anatin'ny andiany Rising Frames narafitra tamin'ny fiarahamiasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo  ao Quito, Ekoadaoro. Nikarakara atrikasa ry zareo tamin'ny 21 Avrily 2018 izay nampiray toerana ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinika ny fomba itazanana an-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setriny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/07/120581/
 Association of Audiovisual Producers – Kichwa Otavalo (APAK na Fikambanan'ny Mpanatontosa Haino Aman-Jery): http://www.apakotavalo.tv/
 jereo sary lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/06/indigena-mujer-nube.jpg